Otu esi edozi koodu mmeghe 910 na Playlọ Ahịa Play | Gam akporosis
Enweghị ihe dịka sistemụ arụmọrụ zuru oke. Enweghi sistemụ arụmọrụ echekwara 100%. Sistemụ arụmọrụ niile nwere ike ibute njehie arụmọrụ, njehie nke, n'ọtụtụ oge, nwere azịza dị mfe, dị ka Play Store njehie 910.
Dịka anyị nwere ike ịchọta njehie 910 na Storelọ Ahịa Play, anyị nwekwara ike ịchọta ozi ezighi ezi ndị ọzọ na Play Store dị ka 491, 921, 413 na 495, nke, ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị ha, bụ ndị kachasị. Lee, anyị na-egosi gị otu esi edozi njehie Storelọ Ahịa Play 910.
1 Gịnị bụ Google Play Store echekwala 910
2 Esi edozi ndozi Google Play Store na njehie 910
2.1 Malitegharịa ngwaọrụ
2.2 Hichapụ cache na Playlọ Ahịa Google
2.3 Kpochapụ oghere Google Services
Gịnị bụ Google Play Store echekwala 910
Ndị na-emepụta sistemụ arụmọrụ niile na-eji usoro nke koodu, n'ozuzu ha, iji chọpụta ngwa ngwa nsogbu nke sistemụ nwere ike iweta. Mgbe egosiri na acha anụnụ anụnụ ọnwụ na Windows, anyị nwere ike ịdebe a koodu njehie hexadecimnke na-agwa anyị ihe kpatara njehie ahụ.
N'ihe banyere Windows, 99% nke oge ahụ, ọ bụ nsogbu ngwaike, nsogbu na-apụta mgbe anyị gbanwere akụkụ nke kọmputa anyị ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ha, tumadi RAM, are na-amalite igosipụta mgbaàmà ndị ịkwesịrị ịla ezumike nká.
N'ihe banyere gam akporo ekwentị, ọ dabara nke ọma, koodu njehie gosipụtara naanị emetụta nsogbu ngwanrọ, enweghị ngwaike. Ọ bụrụ na ngwaike anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-eme ya n'amaghị ama, anyị agaghị echere ozi ezighi ezi, onye ọrụ maara nke ọma na ọ bụ oge ịgbanwe ọnụ.
Njehie 910 egosiri na njedebe gam akporo, na-egosi na ngwa Play Store (ebe egosiri ya) na-ata ahụhụ ụfọdụ nsogbu ma ọ bụ nnyonye anya na anaghị enye gị ohere ịkọwa ntuziaka ka ibudata ma ọ bụ wụnye mmelite.
Njehie ndị ọzọ metụtara Storelọ Ahịa Play na a na-edozi ya n'otu ụzọ ahụ, bụ 491, 921, 413, 495, 506, 509, 492, 905… Agbanyeghị, ozi njehie ndị a gosipụtara ọtụtụ oge karịa 910.
Esi edozi ndozi Google Play Store na njehie 910
Ọ bụrụ na ọnụ gị na-egosi gị ozi ezighi ezi 910 oge ọ bụla ị gbalịrị ibudata ngwa ọhụrụ, nke ibudatara na mbụ ma ọ bụ na ọ gaghị ekwe ka ị wụnye mmelite ọhụrụ nke ngwa ndị ị rụnyere na ngwaọrụ gị.
Sistemụ sistemụ niile chọrọ ịmalitegharị na oge niile. Ọ bụ ezie na ngwaọrụ mkpanaka Ezubere ka ọ dị ogologo oge (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-agbanyụ smartphone na abalị), oge na-aga, ọrụ nke ngwa na sistemụ n'ozuzu abụghị otu.
Ọ dị mma njikwa ebe nchekwa bu akpaka na ọ bụ ọrụ maka imechi ngwa niile anyị na-ejighị nwa oge iji nwee ohere ịchekwa sistemụ ahụ ma nwee ike ịme ngwa ndị ọzọ. Agbanyeghị, dịka m kwuru na mbido, enweghị sistemụ arụmọrụ zuru oke.
N'ihi ya ọ dịghị mgbe ọ na-afụ ụfụ Malitegharịa ekwentị anyị site n'oge ruo n'oge. Malitegharia n'oge, nwere ike izere ihe karịrị otu nsogbu na ụjọ na-emetụtakarị. Na-ewere ihe a niile n'ime akaụntụ, ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ Malitegharịa ekwentị anyị na ngwaọrụ.
Iji malitegharia ngwaọrụ anyị, anyị ga - eme ya pịa ma jide bọtịnụ mmalite ole na ole sekọnd ma họrọ Malitegharịa ekwentị nhọrọ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ gbanyụọ ngwaọrụ kama ịmalitegharị ya, nsonaazụ ga-abụ otu,, ebe ọ bụ na anyị ga-enwe ike ikpochapụ ebe nchekwa nke ngwaọrụ anyị yana nchekwa faịlụ.
Hichapụ cache na Playlọ Ahịa Google
Ọ bụrụ na mgbe ịmalitegharị ọnụ anyị, anyị ga-abanye na Storelọ Ahịa Play ọzọ, anyị ga-anwale usoro ọzọ, ihe ngwọta na-agafe ihichapụ cache na Storelọ Ahịa Play. Iji mee nke a, anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Ihe mbu anyi gha eme bu inweta mwube nhazi nke onu anyi.
Na-esote, pịa na Aplicaciones.
N'ime Aplicaciones, anyị na-achọ Google Play Store wee pịa.
N'ime nhọrọ nke ngwa Google Play Store, pịa Nchekwa.
Ọzọ, na Cache ngalaba, pịa bọtịnụ ahụ Kachapụ oghere.
Ọzọ, anyị na-emeghe Play Store ngwa ọzọ na Anyị na-elele ma njehie 910 akwụsịla ịpụta. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị gafere ngalaba na-esote.
Kpochapụ oghere Google Services
Ọzọ nke ngwọta na anyị nwere anyị nwere mgbe ọ na-abịa na-edozi njehie 910 ma ọ bụrụ na abụọ gara aga ngwọta na m kwuru, adịghị arụ ọrụ, na-aga site kpochapụ oghere nke Ọrụ Google. A na-emelite Ọrụ Google na arụ ọrụ n'agbanyeghị ụdị nke gam akporo ị rụnyere na ngwaọrụ gị.
Yabụ, agbanyeghị na ejiri gam akporo 7 ma ọ bụ gam akporo 8 jikwaa ọnụ ahụ, a na-edobe Ọrụ Google ka ọ dị ọhụrụ kemgbe ha bụ ọnụ ụzọ ámá Google. Ọ bụrụ na ọrụ ndị a, ngwa Google agaghị arụ ọrụ.
Enwere ike ịchọta ihe atụ doro anya banyere mkpa ọrụ ndị a dị na ọdụ Huawei. Ebe ọ bụ na gọọmentị United States ga-emechi ọnụ ụzọ Huawei ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ America, ụlọ ọrụ Asia enwebeghị ike iji ụdị nke gọọmentị Google rụọ ọrụ Gam akporo na-ebupụta kwa afọ, yabụ sistemụ arụmọrụ nke jikwaa Huawei smartphones adịghị agụnye Ọrụ Google.
N'ụzọ dị otu a, ịnweghị ike iji ngwa Google ọ bụla ma ọ bụ ọtụtụ ngwa enwere dị na Storelọ Ahịa Play, ebe ọ bụ enweghị ohere ịbanye na ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ gụnyere na ọrụ ndị a na ha na-eji ọtụtụ ọnụ ọgụgụ nke ngwa.
Iji hichapụ ihe nzuzo nke Ọrụ Google, anyị ga-emerịrị usoro ndị m gosiri gị n'okpuru:
N'ime Aplicaciones, anyị na-achọ Ọrụ Google Play wee pịa.
Mgbe emechara usoro atọ ahụ egosiri m gị n'isiokwu a, njehie 910 na-apụta mgbe ị na-achọ ibudata ngwa ga-apụ n'anya ị ga-enwe ike iji Play Store ọzọ dị ka nkịtị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Esi edozi koodu mmeghe 910 na Storelọ Ahịa Play